Famenoana ranomanitra ary capping tsipika
Savaivony farany ambony amin'ny vavan'ny tavoahangy
Savaivony ambany indrindra
Haavo azo ovaina (lavitra ny
ny vavan'ny tavoahangy)
Refy (ankoatry ny ranoka
tavoahangy) (L * W * H)
Ny mari-pana manodidina
Masinina manaparitaka ranomanitra Pneumatika
Ity milina ity dia mandray fifehezana pneumatic feno, izay mety indrindra amin'ny vavan'ireo vokatra fitaratra manitra.
Ampiasao ny lohan-hareza vita amin'ny fitaovana manokana, apetraho amin'ny tavoahangy ny tavoahangy vera miaraka amin'ny lohana, ary asio tombo-kase ny vavahady sy tavoahangy fitaratra amin'ny fampitoviana ny tsindry rivotra.
Araka ny fitakian'ny mpanjifa, amin'ny alàlan'ny debugging tena izy, hahazoana ny hafainganam-pandeha sy ny vokany tsara indrindra dia io no safidy mety indrindra.
Ny fitsipiky ny fiasan'ny masinina mamatotra dia ny manokatra ny valva-tànana ary mampifandray azy amin'ny loharanon-tsolika. Ataovy ao am-bavan'ilay noza ny tavoahangy vera miaraka amin'ny noza, tsindrio ny switch pneumatika, ampiasao ny latabatra miakatra mba hahitsy ny tavoahangy, ary miaraka amin'izay dia mihamafy ny varingarina, ary aorian'nymanenjana ny vava, miverina ho amin'ny fiaingana niandohany ilay varingarina. Loza tokana
Vahao ny visy fametahana varahina ao am-bavan'ny kofehy, ary ahodinio ny varahina varahina mba hihetsika ambony sy ambany. Amin'ny ankapobeny, ny noza dia apetraka ao am-bavan'ny noza ary somary ambany kokoa noho ny fiaramanidina ambany amin'ny tariby 20 ~ 30. Ny toerana fanovana manokana dia miovaova arakaraka ny noza.
Ny milina fametahana ranomanitra Pneumatika dia iray amin'ireo singa amin'ny famenoana ranomanitra sy famehezana. Izy io dia ampiasaina amin'ny famehezana ny fonon'ny valizy amin'ny famaritana isan-karazany. Savaivony famehezana; Tombana fandefasana famehezana; 99%. Fanerena ny rivotra: 4 ~ 6kg / cm2.
Fanamarihana: Rehefa potipotika ao anaty tehamaina ilay tavoahangy, kitiho ny switch switch ary hianjera ho azy ny tavoahangy.
▲ Ny fandidiana tsy mety dia mety hiteraka toe-javatra mampidi-doza, miteraka ratra na fahasimban'ny entana! Rehefa miasa ny masinina dia mitandrema mba hanakaiky ny faritra iasan'ny asa mba hialana amin'ny loza manokana!
▲ Teknisiana tsy matihanina, azafady, aza zahana ny masinina, raha tsy izany dia mety hiteraka fahavoazana amin'ny masinina.
Refy: 6000 * 900 * 750mm, ao anatin'izany ny sehatra fanangonana 500mm farany
Hafainganana: 1-8m / min, azo ovaina
Famaranana sy fametahana milina famokarana milina: tavoahangy 30-40 / minitra
Masinina tavoahangy kapila
Masinina mameno fametahana 6 mahitsy
Masinina fanidiana fonosana mandeha ho azy
Printer inkjet automatique ink
Sehatra mpampita entana fonosana amin'ny tanana
Masinina famehezana ambony sy ambany sy milina famonosana
Fanamarihana: Ity no fanahafana fototra ary mety amin'ny tavoahangy boribory mahazatra.
Raha feno ny tavoahangy miendrika manokana dia mila famolavolana tsy manara-penitra izy, na hampitombo ny plug anatiny, lohan'ny paompy, na fitaovana fonosana hafa, sns.
Ho an'ny tavoahangy sy fonosana fanampiny, ny bobongolo fanampiny amin'ny famaritana dia voaloa amin'ny vidiny hafa.
Fampidirana sy fanazavana lehibe momba ny fitaovana
1. Masinina tavoahangy kapila (masinina tavoahangy)
Fampidirana fitaovana ：
Ny tavoahangy tavoahangy tavoahangy dia mametraka an-tanana ny tavoahangy ao anaty latabatra boribory, ary mihodina ny turntable mba hamindra tsy tapaka ny tavoahangy ao amin'ny fehikibo conveyor, ary miditra ao amin'ny tavoahangy fanasan-tavoahangy sy famenoana famenoana. Mora ampiasaina, ny fandidiana tsotra dia ampahany tena ilaina ary azo ampiasaina ho tavoahangy fanangonana tavoahangy.
Ny masontsivana teknika lehibe:
Famaritana azo ampiharina: 50-500ml
Savaivony azo ampiharina tavoahangy: φ10-φ80mm
Haavo tavoahangy azo ampiharina: 80-300mm
Fahafahana mamokatra: tavoahangy 0-100 / min bpm (azo ovaina ny governora haingam-pandeha)
Refy: 600 * 600 * 1200mm
2. Linear 6 nozzles apetaho milina famenoana
Masinina famenoana milina famenoana: tsipika mahitsy 6 (azo namboarina arakaraka ny hamokarana)
Famaritana famenoana: 100-400ml
Hafainganana mameno: tavoahangy 2000-2400 / ora
Herin'ny herinaratra: 220v / 50hz. 1.2-2.0kw
Fanerena loharanon-drivotra: 0.4-0.6mpa
Refy: 2000 * 1300 * 1900mm lanja: 320kg
Ny milina famenoana saosy 6-loha dia mampiasa ny haitao mandroso manerantany, amin'ny alàlan'ny fanaraha-maso sensor PLC sy fibre optika elektronika, ary ny fampisehoana an-tsary microcomputer mikasika ny asan'ny interface artifisialy. Misy famenoana tavoahangy. Tsy misy fanondrahana tavoahangy. Izy io dia manana anjara asa fanisana. Raketo ny famokarana ny andro ankehitriny - ny volana ankehitriny. Ny fitaovana dia ampiasaina amin'ny famenoana saosy isan-karazany. Izy io dia mety amin'ny famenoana saosy sakafo. Ny haavon'ny fitaovana sy ny tontolon'ny fifandraisana dia vita amin'ny vy vy 304, tsy mitete, tsy misy sary. Mora diovina. Tsy misy zoro maty, mifanaraka tanteraka amin'ny fenitry ny indostrian'ny tobim-panafody GMP. (Ampiasaina indrindra amin'ny famenoana paty granular, ketchup, sns.).
Ny fampiasa amin'ny fitaovana: tsy misy sisa tavela eo ambonin'ny tavoahangy aorian'ny famenoana, fiantohana ny tampon'ny tavoahangy sy ny tampon'ny fitaovana dia madio sy madio, mora ampiasaina, mety hitazomana. Milina azo ampiasaina, mandeha ho azy automatique. Mety amin'ny famenoana ranoka, tsiranoka ary hafa.
3. Masinina fanidiana fonosana mandeha ho azy
Masinina manarona Rotary (pression) mandeha ho azy, mampiasa ny haitao mandroso an'izao tontolo izao, amin'ny alàlan'ny fanaraha-maso sensor PLC sy fika elektronika elektronika, fampisehoana lahatsoratra an-tariby micro-computer mikasika ny asan'ny interface interface. Sarony mandeha ho azy - fonony mihodina (fanerena) mandeha ho azy. Ary miaraka amin'ny lahasa. Azonao atao ny manoratra ny famokarana ny andro ankehitriny - ny volana ankehitriny.
Rehefa miditra ao anaty masinina fanodinana rotary (tsindry) ny tavoahangy - ny fonony manarona azy dia mandeha ho azy ny fandefasana tavoahangy feno tavoahangy misavoritaka sy tsy ara-dalàna, ary mandamina azy ireo ho eo am-bavan'ny tavoahangy, ary avy eo mihodinkodina ho azy ilay lohan'entana (press) Tsara - ampidiro ny dingana manaraka. Ny fitaovana dia mety amin'ny famenoana ranon-javatra isan-karazany sy ny saron'ny tavoahangy tavoahangy (tsindry) isan-karazany. Izy io dia mety amin'ny famenoana ny pharmaceutika, simika, pestiside, sakafo sy zava-pisotro, kosmetika ary indostria hafa (raha ranom-boankazo, voankazo) Vinaingitra, ranon-javatra am-bava sns.) Ny faritra misy ny fitaovana sy ny faritra misy ny fifandraisana amin'ireo fitaovana dia vita amin'ny 304 fitaovana vy tsy misy vy, tsy mitete, mora diovina. Tsy misy zoro maty, mifanaraka tanteraka amin'ny fenitry ny indostrian'ny tobim-panafody GMP.
Endri-javatra ny fitaovana:
Tsy misy ambina eo ambonin'ny tavoahangy aorian'ny famenoana, hiantohana ny tampon'ny tavoahangy sy ny tampon'ny fitaovana dia madio sy madio, mora ampiasaina ary mety hitazomana. Fampiasana marin-toerana sy hamafin'ny automatisation avo lenta.
Famaritana savaivony vava tavoahangy: 20-80mm
Hafaingan'ny fandrakofana Rotary (tsindry): tavoahangy 2000-2500 / ora
Refy: 2000 * 900 * 1600mm
4. Milina fametahana tavoahangy boribory milina fanoratana mandeha ho azy
• Ny masinina manontolo dia mandray ny rafitra fanaraha-maso PLC matotra mba hampandeha milina tsara sy haingana be ny masinina manontolo.
• Ny rafitra miasa dia fehezin'ny interface interface, izay mora ampiasaina, azo ampiharina ary mahomby.
• Haingana sy milamina ny haitao mandroso
• Fampiharana marobe momba ny fametahana tavoahangy boribory amin'ny habe rehetra
• tavoahangy mihodina ho an'ny fametahana marika mafy kokoa
• Tsipika fifandraisana azo alain-tahaka ho an'ny fizarana eo aloha sy aoriany, na tsy azo ihodivirana fandraisam-bahiny azo mora azo, manangona sy manangona fonosana vita vita
Ny velaran'ny fitaovana dia vita amin'ny vy vy 304, mifanaraka amin'ny fenitra GMP nasionaly.
Famaritana momba ny herinaratra: dingana tokana AC220V 50 / 60HZ
Fanjifana angovo: 300W
Refy: 2000 (L) × 700 (W) × 1270 (H) mm
Hafainganana fanoratana: tavoahangy 40-100 / min (hafainganam-pandeha 3.5m / min)
Toro lalana fampitaovana: miankavia sy miankavanana
Milanja lanja: 200KG
Fametahana marika: ± 1mm ​​(afa-tsy ny lesoka eo amin'ny sticker sy ny marika)
Karazana tavoahangy azo ampiharina: tavoahangy boribory.
Sehatra fitoeran-javatra azo ampiharina: savaivony ivelany 16-150 mm, hahavony 35-400 mm
Famaritana marika azo ampiasaina: haavony 15-200 mm, halavany 23-400 mm
Famaritana ny habetsahan'ny marika:
a) Ny taratasy misy ny labozia dia vita amin'ny taratasy vita amin'ny vera (izany hoe taratasy mangarahara);
b) ny hatevin'ny taratasy famantarana dia tsy latsaky ny 25 × 10-6m (25μm);
5. Fanontam-pirinty inkjet mandeha ho azy
Refy: 370 × 260 × 550
Fanitarana endri-tsoratra: azo aelana 9
Loharanon-kery: AC220V 50Hz 100VA
Fampahalalana fitahirizana: fampahalalana pirinty 60
Isan'ny andalana vita pirinty: tsipika 1-2 (andalana 1 amin'ny sinoa)
Hafaingam-panontana: litera 1400 / (5 × 7)
Ny lanjan'ny masinina: 30 kg
Ny hamandoana manodidina: 90% na latsaka
Temperature manodidina: 10-45C
Ny mpanonta inkjet vita pirinty natsangana dia mandray ny rafitra fanamafisam-peo mihidy «circuit-pump» mihidy ao ivelany, izay manala tanteraka ny fahalotoan'ny tontolo ivelany ary mamonjy ny fanjifana solvent. Ny paompy mpamily herinaratra malaza eo amin'ny sehatra iraisampirenena, ny rafitra filtration mivezivezy amin'ny ranomainty, miaraka amina faritra avo lenta nampidirin'i Leadjet, hiantohana ny fiasan'ny milina maharitra. Izy io dia afaka manonta sinoa, anglisy, isa ary lamina an-tserasera, ary afaka manonta isa, lahatsoratra ary sary voafaritra avo lenta amin'ny fitaovana isan-karazany. Ampiasaina betsaka amin'ny sakafo, fanafody, simika, milina ary elektronika, akora fananganana sy tariby, akora fonosana ary indostria hafa.
6. Sehatra mpampita entana fonosana amin'ny tanana
Ny sehatra fampitana dia azo ampiharina amin'ny sehatra amin'ny fanaovana horonantsary, ady totohondry ary fonosana. Ny mpikirakira dia afaka mipetraka amin'ny lafiny roa amin'ny lampihazo hiasa. Famenoana, fanoratana amin'ny tanana, fanaovana sary, ady totohondry ary ady totohondry Ny tavoahangy dia hiditra amin'ny fomba hafa eo amin'ny fehikibo conveyor (ny halavany dia namboarina mifanaraka amin'ny filàna)
Loharanon-kery: 220v / 50hz
Hafainganana: tavoahangy 40-120 / min (azo ovaina haingam-pandeha)
Refy: 2000 * 750 * 1100mm (azo namboarina mifanaraka amin'ny halavany takiana)
7. Tape ambony sy ambany masinina famehezana sy fonosana
Ny milina famehezana sy famonosana mandeha ho azy dia milina famonosana izay mampiditra famehezana sy famonosana mandeha ho azy. Izy io dia azo ampiasaina amin'ny tsipika famonosana mandeha ho azy, kasety fanaovana tombo-kase ambony sy ambany ary famonosana roa heny mba hahitana fonosana tsy voafehy. fahombiazan'ny asa be. Nifanaraka betsaka tamin'ny famokarana betsaka ny fanafody, elektronika, akora simika isan'andro, kosmetika sns.
Famatsiana herinaratra: 220V / 380V 50Hz / 60Hz 1.5 KW
Hafainganana fonosana: tranga 6-10 / min
Haben'ny famehezana: L200-600 W200-500 H150-500 (mm)
Haben'ny kasety: 48 ～ 60 72 (mm)
Kitapo fonosana habe 10-14 mm
Kasety taratasy Kraft, kasety BOPP
Haben'ny masinina: L2000mm x W1400mm x H1580mm
Lanja mavesatra / lanja net: 400kg
Previous: Fuel mifangaro amin'ny rano phacoemulsification mandrehitra fitaovana fitsitsiana angovo
Manaraka: Kitapo famokarana fonosana